Xogtii Ugu Dambaysay Ee Xaalada Dhaawacyada Real Madrid, Laba Xiddig Oo Soo Laabtay & Afar Maqnaanaya - Gool24.Net
Xogtii Ugu Dambaysay Ee Xaalada Dhaawacyada Real Madrid, Laba Xiddig Oo Soo Laabtay & Afar Maqnaanaya
October 16, 2020 Apdihakem Omer Adam
Real Madrid ayaa war wanaagsan iyo mid aan fiicnaynba heshay kahor kulanka ay la ciyaarayso kooxda Cadiz kulan ka tirsan horyaalka La Liga xilli ay qaar kamida xiddigaha kooxdeeda ka maqnaa soo laabteen kuwo kalena wali maqan yihiin.
Labada ciyaaryahan ee tababarka buuxa ugu soo laabtay Madrid ayaa kala ah goolhaye Thibaut Courtois oo isagu muhiimad weyn usoo lahaa kooxda muddooyinkan ugu dambeeyay iyo waliba daafaca dhexe ee Eder Militao.
Militao iyo Courtois ayaa labaduba qayb kasoo ahaa xulalkooda Brazil iyo Belgium-ka balse xilli hore laga soo fasaxay sababtoo ah dhaawacyo gaadhay.
Courtois ayaa la filayaa inuu kusoo bilaaban doono ciyaarta Cadiz walow ay adagtahay halka Militao haddiiba uu diyaar si dhammaystiran u noqdo la filayo inuu keydka soo fadhiisan doono.
Dhinaca kale shanta ciyaaryahan ee kala ah Eden Hazard, Dani Carvajal, Alvaro Odriozola iyo Mariano Diaz ayaa tababaro gaar ah samaynayay xilli ay soo kabashadooda sii wadaan balse aan ka qayb qaadan doonin ciyaarta Usbuucan.
Warka xasaasiga ah ayaa ah in ka qayb qaadashada Hazard ee kulanka Sabtida dambe ee El-Clasico ee Barceloan uu shaki weyni ku jiro maadaama oo ay jiraan warar sheegaya in tababare Zinadine Zidane uusan doonayn inuu kulankaas adeegsado.
Zidane ayaan doonayn inuu halis galiyo 29 sano jirka garabka weerar ee kooxdiisa oo dhaawacyo dhibane usoo ahaa tan iyo markii uu kusoo biiray sanadkii 2019.